Tanàna lehibe indrindra any Canada | News Travel
Tanàna lehibe indrindra any Kanada
Mariela Carril | 21/04/2022 17:00 | Nohavaozina amin'ny 21/04/2022 22:46 | Canadá, tanàna
Kanada dia ahitana faritany folo sy faritany telo, ny renivohitra dia ny tanànan'i Ottawa ary ny mponina ao aminy, amin'ny faritra sasany amin'ny faritaniny, dia miteny frantsay sy anglisy.
Fa inona ireo Tanàna lehibe indrindra any Kanada?
Izany no tanàna lehibe indrindra sy be mponina indrindra ao amin'ny firenena, na dia tsy renivohitra aza. Tao anatin'ny folo taona farany dia nitombo be izy io ka lasa tanàna fahefatra lehibe indrindra, tsy ao amin'ny firenena fa manerana an'i Amerika Avaratra.
Izany no renivohitry ny faritany Ontario ary ny foibem-bolam-pirenena. Any amin'ny morontsiraka avaratrandrefan'ny Farihy Ontario izy io ary misy super cosmopolitan, feno mpifindra monina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Raha ny tena izy, efa ho ny antsasaky ny mponina ao aminy no tsy teraka teto an-tanindrazana.
ny frantsay no tonga voalohany, fa ny Anglisy no nanorina trano mimanda ka nahatonga ny tanàna voalohany ary tatỳ aoriana, teo afovoan’ny Adin’ny Fahaleovantena Amerikana, dia nanorim-ponenana teto ny miaramila imperial.
Rehefa mitsidika ianao dia aza adino ny mahafantatra ny CN Tower, ny rafitra fahefatra avo indrindra eran'izao tontolo izao, Chinatown, Portiogaly Villa, Little Italy ary ireo faritra mitovitovy amin'izany mifandraika amin'ny vondrom-piarahamonina Indiana, Grika ary Koreana ihany koa. ny queens quay, seranan-tsambo eo amin'ny farihy, dia lalana tsara tarehy koa misy fivarotana.
Montreal dia any amin’ny faritanin’i Québec ary raha 6 tapitrisa eo ho eo ny mponina ao Toronto, dia roa tapitrisa mahery monja no misy an’io tanàna io. Tamin'ny fotoana iray dia tanàna izay tsy nitsahatra nitombo ny isan'ny mponina ao aminy, fa noho ny fifindran'ny orinasa sasany tamin'ny taona 70 (fiandohan'ny fanatontoloana), dia nanomboka nivadika ny fironana.
Ny tanàna dia ao amin'ny nosy mitovy anarana eo anelanelan'ny Riviere des Praires sy ny Reniranon'i Saint Lawrence ary, araka ny mety ho fantatrao, eto. teny frantsay. Manan-danja tokoa ny kolontsaina sy ny vakoka ary maro ny hetsika nasionaly ankalazaina any. Mahavariana ny haavon'ny kolontsainan'ny mponina ao aminy oniversite efatra.
Montreal dia naorina tamin'ny 1642 noho izany dia iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra eto amin'ny firenena izy io, ary hatramin'ny taona 60 dia namirapiratra toy ny foibe ara-bola izy io, toerana iray nalain'i Toronto. Foko telo no nonina tamin’ireo tany ireo talohan’ny nahatongavan’ny Frantsay, izay nitady volamena, ary olona arivo no tena fonenan’ny vazimba teratany. Tsy volamena anefa ilay volamena fa pyrite na quartz fotsiny, ka tsy dia nisy fandrosoana firy. Taona maro taty aoriana dia tonga ireo misionera mba hanorina trano mimanda izay tsy nitsahatra nanafika ny Indiana.
Na dia teo aza ny Anglisy ary tamin'ny fotoana iray teo amin'ny tantarany dia izy ireo no maro an'isa, ny fahatongavan'ireo mpifindra monina Frantsay tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia namaritra ny dikan'ny Frantsay mandrakizay. Hitanao amin'ny tsangambato sy tranobeny izany, fa ankoatra ny lova frantsay, dia manana ny tanàna zaridaina tsara tarehy, un boulevard ho very an-tongotra vetivety, solontenan'ny fahasamihafan'ny kolontsaina manankarena ao an-tanàna, tranombakoka sy teatra.
Izy io no tanàna fahatelo lehibe indrindra any Kanada any amin’ny faritanin’i Alberta, any andrefan’ilay firenena, eo anelanelan’ny havoana sy ny lemaka, tokony ho 80 kilometatra miala ny Tendrombohitra Rocky malaza. Vahoaka teratany samihafa no nonina teo amin’ilay faritra, mandra-pahatongan’ny Eoropeanina tamin’ny taonjato faha-XNUMX. Nantsoina hoe Fort Brisebois izy io voalohany, ary Fort Calgary tatỳ aoriana.
Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia tonga ny lamasinina ary niaraka tamin'izany ny fifindra-monina hatramin’ny nanomezan’ny fanjakana tany ny olona te-hipetraka ao amin’ny faritra afovoan’ny firenena, ho fepetra hamenoana azy. Noho izany, dia maro no niampita avy any Etazonia, fa koa avy any Ekosy sy Irlandy. Betsaka ny Sinoa avy eo no miasa amin'ny lalamby ary misy amin'izy ireo ihany koa no mijanona.
Ny solika dia hita tany am-piandohan'ny taonjato faha-XNUMX, na dia efa-polo taona mahery taty aoriana aza dia nanomboka noraisina ho zava-dehibe kokoa ny fametrahana ary avy eo dia tonga ny firoboroboan'ny Calgary. Ary avy eo indray, miaraka amin'ny krizy solika tamin'ny 1973.
Ny afovoan-tanànan'i Calgary dia manana faritra dimy ary avy eo dia misy faritra ambanivohitra lehibe. Lava sy maina ny ririnina ao aminy, ary mafana sy fohy ny fahavaratra.. Aza mandeha amin'ny ririnina raha tsy tianao ny hatsiaka tafahoatra, fa mbola Iray amin'ireo tanàna be masoandro indrindra ao amin'ny firenena izy io.
Izany no renivohitr'i canada fa araka ny hitantsika, dia tsy izy no be mponina indrindra, izay misy mponina iray tapitrisa mahery. 400 kilometatra miala an'i Toronto izy io ary 200 monja avy ao Montréal. Izy no renivohitra hatramin'ny nanapahan'ny Mpanjakavavy Victoria tamin'ny 1857, satria faritany tsy miandany ho an'ny vondrom-piarahamonina roa manan-danja indrindra, ny Anglisy sy ny Frantsay.
Ny teny dia avy amin'ny teny vahiny odawa izay midika hoe "mivarotra". Manana faritra an-tanàn-dehibe maro izy io, miampita ny ony mitovy anarana, mankafy ny toetr'andro mafana, miaraka amin'ny fahavaratra mafana ary ririnina mangatsiaka sy misy lanezy.
Afaka mitsidika ianao tranombakoka maromaro, tantara, voajanahary, sary, misy iray natokana ho an'ny ady, ny zaridainany sy ny fialam-boly izay tena maro, ary raha mandeha amin'ny lohataona ianao dia afaka mahita ny fetin'ny tulips, voninkazo tonga fanomezana avy amin'ny fianakavian'ny mpanjaka holandey.
Izany no renivohitry ny faritanin'i Alberta, ao amin'ny faritra tena lonaka, ary ao ambadiky ny Calgary no tanàna be mponina indrindra ao Alberta. Misy 300 kilometatra eo anelanelan'izy ireo. Ny marina dia tsy tanàna be mponina io, tsy mahatratra mponina iray tapitrisa, ary tena ambany ny tahan'ny mponina, nefa mbola Izy io no foibe ara-kolontsaina sy governemanta ao amin'ny faritany.
Tsy haiko na tia toeram-pivarotana ianao fa amin'ny maha-daty azy dia tsara ny milaza fa ity ilay nisy taloha, nanomboka tamin'ny 1981 ka hatramin'ny 2004, ny foibe fivarotana lehibe indrindra eran-tany, ny West Edmonton Mall. Tahaka an'i Calgary, niaina a solika boom izay nisy fiantraikany ary ny lanitra an-tanàn-dehibe dia tena maoderina.
Mandritra izany fotoana izany tanàna tena maitso izy ioRaha ny marina, ny lohasaha misy azy dia avo roa amby roapolo heny noho ny Central Park any New York. Misy elms, pine, fir, birches, lavenona, maple, voanjo...
araka izay azonao eritreretina, mangatsiaka be ny ririnina, minus 0 degre foana. Noho izany, raha sendra mandeha amin'ny ririnina ianao, dia tokony hitsidika tranombakoka: The Alberta Aviation Museum, Royal Museum, TELUS, Science, Art Gallery ary Fort Edmont Park, ilay tranombakoka lehibe indrindra momba ny tantaram-piainana eto amin'izao tontolo izao.
Ary farany, Vancouver, any amin’ny morontsirak’i Pasifika, any amin’ny faritanin’i Kolombia Britanika. Manaraka ny andilan'i Georgia izy io ary anisan'ny Saikinosy Burrard. Na dia misy aza ny Nosy Vancouver, tsy ao ny tanàna.
Iray amin'ireo tanàna misy azy io andro mafana kokoa Kanada, ho an'ny morontsirak'i Pasifika, fa iray amin'ireo mando be indrindra. Ny mponina ao aminy dia tsy mihoatra ny 600 arivo ny mponina ary tena isan-karazany. Fokonolona maro no nanorim-ponenana tao, avy amin’ny lafivalon’izao tontolo izao.
Ny tanàna dia nanomboka tamin'ny tapaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, fony izy io no Gold Rush, fa ny seranan-tsambony sarobidy koa dia nanome mponina. Io no seranan-tsambo lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Na izany aza, ankoatra ny indostria mampiavaka azy nitombo ny fizahantany matetika amin'ity ampahany ity dia azo lazaina momba ny indostrian'ny sarimihetsika, mibodo ny toerana fahatelo aorian'i Los Angeles sy New York. Tsy ratsy ho an'i Vancouver.
Rehefa mandeha ianao, aza adino ny mandeha, tsidiho ny azy zaridaina, ny tora-pasika ary ny tranombakoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Canadá » Tanàna lehibe indrindra any Kanada